Afgambiga la isku dayay ee dalka Burundi - BBC Somali
Afgambiga la isku dayay ee dalka Burundi
Xiisad ayaa ka taagan dalka Burundi kadib markii maanta uu general ku dhawaaqay in xilkii laga tuuray madaxwayne Pierre Nkurunziza.
Balse, xukuumadda ayaa beenisay in military-gu dalka qabsaday.
Dadwayne ayaa isugu soo baxay waddooyinka caasiamdda Bujumbura daqiiqado gudahood markii general ciidamada ka tirsanaa uu sheegay in madaxwayne Pierre Nkurunziza xilkii laga xayuubiyay.
Qaar badan ayaa dusha ka fuulay taangiyada iyadoo qaarna ay lulayeen caleemo qoyan iyagoo u jihaysta dhanka fagaaraha xoriyadda, iyagoo u muuqday in aysan ka gabanaynin joogitaanka xoogga leh ee ciidamada amnigu ku sugnaayeen waddooyinka.
Major General Godefoid Niyombare oo ah sarkaal horay u hogaamin jiray waaxda muqaabaraadka dalka oo dhowaan uu xilka ka qaaday madaxwaynaha, ayaa ku dhawaaqay go'aanka xilk ka qaadista madaxwaynaha.
Balse ciidamada daacadda u ah madaxwaynaha ayaa ku tilmaamay wax lagu qoslo isku dayga awood doonka ah, iyagoo sheegay in madaxwayne Nkurunziza uu si buuxda dalka u haysto.
Tiro yar oo ka mid ah ciidamada ayaa rasaas ku furay dadwaynaha si ay u kala eryaan. Willy Nyamitwe oo ah afhayeenka madaxwaynaha, ayaa sheegay in kuwa ka dambeeyay afgambiga aan hadda la garanaynin meel ay galeen, cadaaladana la horkeeni doono.
Cadaadis caalami ah ayaa ku saarnaa madaxwaynaha 51 jirka ah, oo horay u ahaa hogaamiye mucaarad ah, in dib loo dhigo doorashooyinka loo qorsheeyay doorashooyinka.
Konton kun oo qof ayaa guryahooda ka cararay dhowrkii todobaad ee la soo dhaafay cabsi laga qabo in dagaalkii sokeeye ee isirka ku salaysnaa ee Burundi ee dhamaaday mar hore in uu mar kale dib u soo cusboonaado.